Abavelisi kunye nabaxhasi beCasserole - China iMveliso yeCasserole yeThutha
I-cationic polyester eyandisiweyo ye-casserole bag ephethe ipaneli yokufudumeza
Le bhegi ipholileyo yecasserole yinto ebaluleke kakhulu ngakumbi kwintengiso yaseUSA. Qho ngonyaka sithengisa uninzi lwezi ngxowa eMelika. Hambisa ukutya okushushu kwaye ugcine indalo yakho ye-casserole ishushu okanye ibanda kangangeeyure. Kulula ukusula ukucoceka. Ingxowa nganye ye-casserole inegumbi elikhulu elikhulu emazantsi kunye negumbi elinokwandiswa eliphezulu. Kulula ukuphatha isiphatho kunye nengxowa evaliweyo yangaphandle yokubamba izitya zokusebenzela okanye i-napkins, njl njl.
Ipholiyesta eyandisiweyo ibhegi yenethiwekhi eprinta ifashoni
Le bhegi ipholileyo yecasserole yinto ebaluleke kakhulu ngakumbi kwintengiso yaseUSA. Qho ngonyaka sithengisa uninzi lwezi ngxowa eMelika. Hambisa ukutya okushushu kwaye ugcine indalo yakho ye-casserole ishushu okanye ibanda kangangeeyure. Kulula ukusula ukucoceka. Ingxowa nganye ye-casserole inegumbi elikhulu elikhulu emazantsi kunye negumbi elinokwandiswa eliphezulu. Kulula ukuphatha isiphatho kunye nepokotho evaliweyo yangaphandle yokubamba izitya zokusebenzela okanye i-napkins, njl njl. Izinto zangaphandle yi-300D / 600D ipholiyesta ene-PVC eyomeleleyo eqinileyo. I ...
Ipholiyesta ejikeleze imilo yebhegi epholileyo i-casserole bag yenethiwekhi
Inombolo Inombolo: ML1927
Inkcazo: Imilo yokupholisa ibhegi yeCasserole
Ngaphandle kwecasserole carrier bag epholileyo: 300D ipholiyesta, 600D ipholiyesta, Canvas. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65.
Ngaphakathi kwebhegi epholileyo ye-casserole: i-PEVA / iAluminiyam ye-foil lining. Umbane wengxowa epholileyo iya kuba ngumgangatho wonxibelelwano wokutya.
Umsebenzi wengxowa epholileyo: Gcina ukutya okanye iziselo zibanda okanye zishushu malunga neeyure eziyi-3-4. Ifanelekile ngaphandle okanye ekhitshini.
Ipateni yebhegi epholileyo: Unokukhetha kwiwebhusayithi yam okanye uyilo olwenziwe ngokwezifiso
I-logo yebhegi epholileyo: I-logo eyenziwe ngokwezifiso ilungile
I-MOQ yebhegi epholileyo ye-casserole: 2000pcs ngombala ngamnye
Isatifikethi somzi-mveliso: BSCI, FDA, LFGB, REACH, CA65
Ixesha lesampulu yebhegi epholileyo ye-casserole: iintsuku ezi-7
Umgangatho ophindwe kabini wengxowa yecasserole epokothweni
Ingaba uhamba kwiqela lakho elilandelayo lokutya, i-potluck, i-block block yeqela, okanye umcimbi osisigxina, i-casserole carrier ehamba phambili yindlela efanelekileyo yokuhambisa izitya zakho ezizithandayo kwiimeko ezizodwa. Sinika ukhetho olubanzi lwee-casserole carriers. Sinikezela ngeentlobo ngeentlobo zeemilo, izimbo, kunye neepateni zombala ezimnandi eziqinisekileyo zokonwabisa nawuphi na umamkeli zindwendwe okanye undwendwe. Gcina ukutya okufudumeleyo kunye nokutya okubandayo kubanda ngokujonga ukhetho lwethu oluhle namhlanje! Ukuba ujonge ngaphezulu ...
Ibhegi yokuthwala kabini casserole
Le bhegi ipholileyo yecasserole yinto ebaluleke kakhulu ngakumbi kwintengiso yaseUSA. Qho ngonyaka sithengisa uninzi lwezi ngxowa eMelika. Hambisa ukutya okushushu kwaye ukhuselekile ngale ngxowa yokuhamba yomeleleyo. Gcina indalo yakho ye-casserole ishushu okanye ibanda kangangeeyure. Kulula ukusula ukucoceka. Izinto zangaphandle yi-600D / 300D ipholiyesta ene-PVC edibeneyo ehlala ixesha elide. Umbala wengxowa unokuba yi-PEVA emhlophe, i-PEVA engwevu okanye ifoyile yealuminium ekhuselekileyo kunxibelelwano lokutya kunye nokucoca ngokulula ngelaphu elifumileyo. Sihlala sisebenzisa i-3-4mm ubukhulu ...
ICationic polyester casserole ibhegi yenethiwekhi enepaneli yokufudumeza
Le bhegi ipholileyo yecasserole yinto ebaluleke kakhulu ngakumbi kwintengiso yaseUSA. Qho ngonyaka sithengisa uninzi lwezi ngxowa eMelika. Hambisa ukutya okushushu kwaye ugcine indalo yakho ye-casserole ishushu okanye ibanda kangangeeyure. Kulula ukusula ukucoceka. Iphaneli yokufudumeza isixhobo esongezelelweyo esifanelekileyo kwitshaja yemoto eya kuhlala ishushu ixesha elininzi. Izinto zangaphandle yi-cationic polyester ene-PVC edibeneyo ehlala ixesha elide. Umbala wengxowa unokuba yi-PEVA emhlophe, i-PEVA engwevu okanye ifoyile yealuminium ekhuselekileyo kunxibelelwano lokutya ...
Ipholiyesta yelaphu i-casserole bag yenethiwekhi ephethe isibambo esiphindwe kabini
Ipholiyesta yelaphu i-casserole ibhegi epholileyo
Inombolo Inombolo: ML20247-L
Ubukhulu: 40 * 27 * 8cm
Inkcazo: Ingxowa epholileyo yeCasserole
Umsebenzi: Gcina ukutya okanye iziselo zibanda okanye zishushu malunga neeyure eziyi-3-4. Ifanelekile ngaphandle okanye ekhitshini.